Imfazwe ebandayo ye-Olima Hack 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack-Gamepron
OLIMA Ifowuni yeDuty Ops emnyama: Imfazwe ebandayo
Umlo obandayo ungasondela njengesigebenga sokwenyani esisebenzisa u-Olima!
Yiba lilungu lethutyana le GamePron kwaye ubone ukuba kunjani! Thenga isitshixo semveliso seentsuku ezi-1 namhlanje.
Nokuba uzizamile izixhobo kwaye uyazithanda, okanye ufuna nje ukuntywila ungene, le yeyakho! Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje.
UmdlaloPron uhlala uwamkela amalungu azinikeleyo kusapho ngobabalo! Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje.
Umlo obandayo yenye yezona zinto zithandwayo kukhutshwa uxanduva lomsebenzi esakha sabona, kwaye kwavakala kunengqondo ukuphuhlisa iOlima Cold War Hack yethu ukuze ifane nomoya. Ukufikelela ekukhohliseni okuza kutshintsha umhlaba wakho!
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo u-Olima yokuNgcwaba ulwazi
Ngaba ujonge ukukopela okuqinileyo okuza kukunceda ulubethe ukhuphiswano kwiMfazwe ebandayo? Sukujonga phambili, njengoko iMfazwe ebandayo u-Olima Hack inazo zonke izinto ezifunekayo ukuze ususe onke amaqela uwedwa. Yiva ukuba kunjani ukusebenzisa i-Cold War Aimbot exhotyiswe nge-FOV Circle namhlanje! Iphuhliselwe i-Intel kunye ne-AMD CPU's, obu buqhetseba buza ngesiNgesi kwaye bugcinelwe i-Nvidia kunye ne-AMD esekwe kwi-GPU nayo. Ukukopela kungaphakathi kwaye kulula kakhulu ukukusebenzisa, ke nokuba umqweqwedisi oqalayo unokuxhamla kwizixhobo ezilapha kwiGamePron.
Fumana izinto ezothusayo ezinje ngeCold War Aimbot ene-FOV Circle, uSmooth Aiming, ukuBekwa phambili kwamathambo, kunye nezinye izinto ezininzi ezimangalisayo ezenza ukuthoba abachasi bakho ikhekhe. I-ESP Hack (ukujonga okungakumbi kokuqonda) ikwabandakanyiwe, ivumela abasebenzisi ukuba babone abo badlala nabo, iintshaba, kunye nezinto zodonga.
Ulwazi lutshaba (umgama, abadlali beqela, amagama, impilo)
Uhlengahlengiso lwe-Aimbot FOV kunye neSmooth
Cwangcisa isangqa seFOV
Akukho zimpawu zikhethekileyo kodwa ziyeza kungekudala
Malunga ne-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo u-Olima Hack
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo u-Olima ayisiyo bungqina bokuba ungumsinga, kodwa iseyindlela eqinisekileyo kwabo bajonge ukuqhubela phambili ngokukhawuleza ngakumbi kunabanye. Isenokungakulungeli ukonwabisa ababukeli bakho, kodwa ilungile kule midlalo ibilayo ishiya izandla zihlabe kunangaphambili! Uya kufuna ukukhubaza uKhuseleko ngaphambi kokumilisela iMfazwe ebandayo u-Olima Hack, njengoko into engeyonyani inokuthintela ukukopela ekusebenzeni ngokufanelekileyo. Ungayisebenzisa le nto yokukopela kwiscreen esigcweleyo, kwaye ungasebenzisa abalawuli nayo (ukuba nje ubuyile umlawuli ngesixhobo).
Kutheni usebenzisa i-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo u-Olima ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli banokuhleka ebusweni bakho xa ubuza malunga nezixhobo zokuhlaziya, okanye nenkxaso yabathengi, akunjalo apha kwi-GamePron. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa zonke izixhobo zethu zazakhelwe ukuhlala ixesha elide, okuthetha ukuba sizakugcina zihlaziywa kulo lonke ixesha lomdlalo. Nanini na xa kukho uhlaziyo lwe-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo, amathuba okuba ungalindela ukuba uhlaziyo lutyhalelwe ngaphandle kwemfazwe ebandayo u-Olima! Ukugcina izixhobo zethu zihlaziywa kuvumela abasebenzisi ukuba bafumane elona thuba lihle lokukhangela ngeGamePron, kwaye oko kusincede sazakhela igama kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Imenyu yomdlalo ongaphakathi komdlalo efumaneka kwi-COD Black Ops yethu: Imfazwe ebandayo u-Olima Hack akukho lula ukufikelela kuyo, kodwa ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ukuthanda kwakho. Unokuhlengahlengisa phantse lonke useto olunxulunyaniswa ne-COD Black Ops yethu: Imfazwe ebandayo u-Olima Hack, ukusuka ngokukhawuleza ukuba i-aimbot izakuphendula njani, ukuba iya kuba nkulu kangakanani i-FOV Circle yakho. Qwalasela ukuba zeziphi ii-ESP eziza kubonakala ngokuqhekeka okwenziweyo, kunye nokuhlengahlengisa ezinye iisetingi ngokubhekisele kwiCold War Cheat yethu. Sithembele xa sisithi i-GamePron ilugqibe ukhuphiswano xa kufikwa kwimingxunya yethu, ngakumbi kwimenyu yomdlalo.
A1. Ukukopela kulula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ifuna ubhaliso kulayisha. Landela nje "indlela yokusebenzisa"
Umbuzo 5. Ngaba ukukopela kusebenza kwimowudi yeWarzone?
Nokuba udiniwe kukuxhomekeka kwiirandi ukukunceda uphume, okanye ufuna nje ukubona ukuba kunjani "kwelinye icala", ukusebenzisa iMfazwe ebandayo uOlima Cheat kuya kukunceda uphumelele ngeendlela ezininzi kunenye.
Ilindelwe Lawula kunye COD yethu BO Olima lomnqweno yimfumba?